Car Carpet Fekitori, Vatengesi - China Carpet Kapeti Vagadziri
YeMotokari Yekuwedzera Yese Yemamiriro ekunze PVC Pasi Carpet MuPure Ruvara
Silk mhete dzemotokari mateki ane simba rakasimba rekuvanza tsvina uye anogona kuchengetedza mota yakachena kwenguva yakareba.
Isina mvura PVC pasi peCar Mutsoka Mat weAuto Interiors
Iyo siriki yedenderedzwa tsoka mameti ine yakasarudzika anti-tsvina uye isina mvura basa, yakasarudzika sirika denderedzwa dhizaini inogona kukiya iyo stain mwando haina kubuda, chengetedza mota yakachena uye yakashambidzika nguva dzese, nyore kuchenesa, inomhanya iyo yakachena.
Eco-inoshamwaridzika PVC Coil Loop Mota Tsoka Mat Auto Carpet yeVechicle Interiors
Maumbirwo esimbi mhete tsoka tsoka zviri nyore kutarisira, zviri nyore kuchenesa, zvinogona kudzivisa kukura kwebhakitiriya, zvine chengetedzo yakanaka uye antibacterial mhedzisiro, yakazara kudzivirirwa kwehutsanana hwemukati memota.
Anti Kutedzemuka PVC Ruviri Ruvara Mota Floor Rutsoka Mat
Iyo silika yetsoka tsoka tsoka haina kuomarara pasi pekupisa kwakadzika uye hainyungudike pasi pekupisa kwakanyanya. Iine yakanaka yekudzivirira mamiriro ekunze, gore rese kutenderera, ingave kutonhora, kupisa hakuchina deformation hakupere, hwakavimbika mhando uye hwakareba kushandiswa kutenderera.
Yakasimba Yemvura Isina PVC Coil Mota Mat muRoll neAnti-kutsemuka Kudzoka
Denderedzwa resilika raBenson rakagadzirwa neakasarudzika uye zvakatipoteredza zvine hunyanzvi hwePVC resin remubatanidzwa, kuburikidza nekunyunguduka kwepamusoro-tembiricha uye extrusion, yakaumbwa kuita tambo yesiriki yakasungirirwa kune iyo PVC inotsigirwa, mushure mezviitiko zvakawanda kwazvo. Chigadzirwa hachina kuwedzera wakisi yeparafini yakasanganiswa, iyo inokuvadza kune hutano, uye ine hutano uye isina hwema. Zvidimbu zvakaraswa uye zvigadzirwa zvinogadziriswazve thermoplastic resin.